रोपाइँको अर्थशास्त्र - Rojgar Manch
खेती किन गर्ने ? खेत बाँझै भए इज्जत जान्छ भन्ने डरले रु यो मध्यमवर्गीय खोक्रो इज्जत धान्न मेरी ६० नाघेकी पत्नीले कति वर्ष रोपाइँ गराउलिन् ? खेत बेच्न पनि उनलाई मन्जुर छैन । अंशमा पाएको माटो बेचेर सक्न हुँदैन भन्छिन् । उनको अनुहारमा खेत रोपेपछि देखिएको सन्तुष्टिका लागि नोक्सान बरु सहने तर खेत रोप्नैपर्ने उनको जिद्दीका सामु म त नतमस्तक हुँला तर कतिन्जेल रोपाउन सक्छिन् उनले ?